အမည်ရင်း - ဦးလှမောင်သွင်
မိဘအမည် - ဦးကြာ + ဒေါ်သေးသေး
မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၂၈၀ ပြည့်၊ တော်သလင်း လပြည့်ကျော်၊ ၁၀ ရက်
မွေးဖွားရာ ဒေသ - ဖျာပုံခရိုင်၊ ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ရေပူဝရွာ
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ကို စတင်တည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ငယ်စဉ်က ကျောင်းမနေခဲ့ရဘဲ အစ်ကိုဖြစ်သူက အိမ်တွင် စာသင်ပေးသည်။ သူက စာတွင် စိတ်မဝင်စား၊ အရုပ် ဆွဲသည်။ ထို့နောက် သူ့ကိုယ်သူ ကျောင်းအပ်ကာ ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို သင်အံလေ့ကျက်သည်။
အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်တွင် အသိအကျွမ်း မရှိသော ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ပြေးသည်။ ကြော်ငြာ ဒီဇိုင်း၊ ရုပ်ရှင် ဆလိုက်၊ အထည် ဒီဇိုင်းတို့ ရေးဆွဲ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသည်။ ၁၉၃၃-၃၄ ခုနှစ်တွင် သက်စောင့် မဂ္ဂဇင်းတွင် 'လှမောင်' အမည်ဖြင့် ဝတ္ထုတိုများကို ရေးသားခဲ့သည်။ 'ဝါးခယ်မလှမောင်' အမည်ဖြင့် နဂါးနီ ဂျာနယ်တွင် ဝတ္ထုတိုများ၊ ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ ကလောင်အမည် အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် နဂါးနီဂျာနယ်၌ ဘဆွေ အမည်တူ နှစ်ဦး ဖြစ်နေသဖြင့် ၎င်းက ရန်ကုန်ဘဆွေဟု အမည်ယူခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလတွင် ဖျာပုံခရိုင် မြေအောက်တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဗိုလ်နေဝင်းနှင့် ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ အစီအမံဖြင့် ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ရဲဘော်မြလှိုင် (ပေဖူးလွွာမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်း) နှင့်အတူ ဂဠုန်ဦးစောကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ရဲဘော်မြလှိုင်မှာ ကားမောင်းလိုက်ပို့သူ ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်ဘဆွေက သေနတ်ဖြင့် ဂဠုန်ဦးစောကို ပစ်ခတ် လုပ်ကြံခဲ့သော်လည်း နားထင်ကိုသာ ရှပ်မှန်သဖြင့် ဂဠုန်ဦးစော အသက်မသေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် တပ်မှာလည်း အမှုမထမ်း၊ နိုင်ငံရေး မှာလည်း မပါဝင်ဘဲ စာပေနှင့် အနုပညာ လောကတွင်သာ ကျင်လည် နေထိုင်သည်။ ရန်ကုန် အစိုးရ ဖြစ်ချိန်တွင် စစ်တပ်သို့ ခေတ္တမျှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် စာပေနှင့် အနုပညာလောကတွင် ပြန်လည် အခြေချ ပြန်သည်။
ရန်ကုန် ဘဆွေသည် စာပေတွင်သာမက ပန်းချီ၊ ပြဇာတ်နှင့် ရုပ်ရှင်တွင်လည်း နှံ့စပ်ပေါက်မြောက်သည်။ သူ၏ ပန်းချီ ကားများနှင့် ပြဇာတ်များသည် အောင်မြင်ကျော်ကြားသည်။
ရန်ကုန် ဘဆွေသည် တည်မြဲသန့်ရှင်းကွဲချိန်တွင် မီးဒုတ် သတင်းစာကို ဦးစီး ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး တည်မြဲဘက်မှ ရပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းစစ်မှာ မြန်မာ့ တပ်မတော်က ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများကို ကရင်လက်နက်ကိုင် တော်လှန်သူတွေက ဖမ်းမိပြီး ကရင်နယ်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံခဲ့ရရာ၊ ရန်ကုန်ဘဆွေနှင့် ရဲဘော်တစုက ခရီးရည် ချီတက်ပြီး ကရင်လက်မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်နဲ့ တပ်မတော် အရာရှိတစုကို ကယ်တင်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းကို ရေးသားခဲ့တဲ့ "တိုက်ယူရသည့် မျက်ရည်တပေါက်" နှင့် တော်လှန်ရေး ကောင်စီခေတ် အခြေအနေကို သရော်ရေးဖွဲ့တဲ့ "ရွွေဝါပြည်" တို့ ဝတ္ထုတို့မှာ အထူးကျော်ကြားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရွွေဝါပြည်ဝတ္ထုကို မဆလအစိုးရက လိုက်လံသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး ထုတ်ဝေခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ဦးနု ဦးဆောင်သည့် ပါလီမန်ဒီမိုရေစီ ပါတီ ဖွဲ့စည်းပြီး ထိုင်းနယ်စပ်ကို အခြေပြုကာ ဦးနေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ မဆလ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီ ပြိုကွဲပြီးနောက် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် မဆလအစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှ မြန်မာပြန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ဘဝကြင်ဖော် ဒေါ်မြသွေး နှင့် သားသမီးများဖြစ်ကြသော မမေသွဲ့ဆွေ၊ မသက်နွဲ့၊ မမြမူမူ၊ မောင်ဆွေညို၊ မဆင်းရွွေရည်၊ မလှလှနု၊ မမြဆွေ၊ မောင်သက်မှူး၊ မအိအိချော နှင့် မြေး (၁၆) ယောက်တို့ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် စွန့်ခွာအနိစ္စရောက်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီး၏ ဈာပနသို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သူ့ကိုချစ်သော အနုပညာမောင်နှမများ (၈၄) ဦးခန့် လာရောက်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်း ဆရာကြီး၏ နာရေးအမှတ်တရ မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ပါဝင်ရေးသားခဲ့သော မဂ္ဂဇင်းများမှာ – ကာနယ်ဇင်း၊ ကေသီပန်၊ ကောဇာသစ်၊ ဂျာနယ်ပြာ၊ ငွေတာရီ၊ စနေနဂါးနီ၊ စာပန်းချီ၊ စုံထောက်၊ နဂါးနီ၊ နဝဒေး၊ ပေဖူးလွွာ၊ ပန်းချီ၊ မီးဒုတ်၊ မြဝတီ၊ ရုပ်ရှင်ချစ်သူ၊ ရွွေဝတ်မှုံ၊ ရှုမဝ၊ ဝတ်မှုံ၊ သုတေသီ၊ သက်စောင့်၊ သွေးသောက် စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကလောင်အမည်ကွဲများမှာ – စံနက်ကျော်၊ လှမောင်၊ ဝါးခယ်မလှမောင်၊ သတိုးဆွေ တို့ဖြစ်သည်။
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် မဆလ အစိုးရက နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် (ပထမအဆင့်) ကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၁၇၊ ၉၊ ၈၆ တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန် ဘဆွေ ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်များ
စဉ်	အမည်	ထုတ်ဝေနှစ်
၁	ခေတ်၏သားကောင်	၁၉၆၄ ခုနှစ်
၂	ချီလေသော်လည်း	၁၉၆၁ ခုနှစ်
၃	ချစ်ဇနီးသို့	၁၉၆၁ ခုနှစ်
၄	ချစ်ပြီး မမုန်းစေလိုသူ	၁၉၆ရ ခုနှစ်
၅	ချစ်သောသူသို့ ချစ်သည်သူ့မှ	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၆	စကားနက်	၁၉၆၆ ခုနှစ်
ရ	စံပယ်တို့ခေတ် (ပထမပိုင်း)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၈	စံပယ်တို့ခေတ် (ဒုတိယပိုင်း)	၁၉၇၂ ခုနှစ်
၉	စာယဉ်စုဝတ္ထုများ	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၁၀	စာရေး ဆရာတို့၏ တခန်းရပ် ပြဇာတ် လေးပုဒ် (ရန်ကုန် ဘဆွေ + ခင်မောင်ရီ + အောင်လင်း)
၁၁	စာရေးခြင်းအတတ်	၁၉၆၈ ခုနှစ်
၁၂	စာအုပ်စင် (၁)	၁၉၆၅ ခုနှစ်
၁၃	စနစ်ကို အတင်းပြောင်းမည်	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၁၅	တေးသည်	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၁၆	တောပန်းတပွင့်၏ ဇာတ်သိမ်းနှင့် ဝတ္ထုတိုများ	၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်
၁ရ	တိုက်ပွဲဟူသည်	၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်
၁၈	တိုက်ယူရသည့် မျက်ရည်တပေါက်	၁၉၆၃ ခုနှစ်
၁၉	နဝေဒေး တခန်းရပ် ပြဇာတ်	၁၉၅၈ ခုနှစ်
၂၀	နန်းဟာဗီး	၁၉၆၄ ခုနှစ်
၂၁	နွမ်း	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၂	နှင်းနု	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၂၃	ပန်းသွင်သီကုံး ရေးနည်းထုံးကား	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၂၄	ဖိုးလမင်းကို တားပါလား	၁၉၇၂ ခုနှစ်
၂၅	ဖက်ဆစ်သရဲတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းပါလို့ အမှတ် (၁)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၆	ဖက်ဆစ်သရဲတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းပါလို့ အမှတ် (၂)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂ရ	ဖက်ဆစ်သရဲတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းပါလို့ အမှတ် (၃)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၈	ဖက်ဆစ်သရဲတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းပါလို့ အမှတ် (၄)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၂၉	ဘဝတိုက်ပွဲ	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၃၀	မယားနှစ်ယောက် ဒဏ်နှင့် အခြား ဝတ္ထုတိုများ	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၃၁	မိလဲ့လဲ့နွယ်	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၃၂	မင်းလိုလူစား အများကြီးဟေ့	၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်
၃၃	မင်းသား ကိုကြီးကောင်း	၁၉၅၉ ခုနှစ်
၃၄	မဒ္ဒီနှင့် အခြားဝတ္ထုများ	၁၉၆၅ ခုနှစ်
၃၅	မိန်းမဟူသည်	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၃၆	မြမြစိန်ကို အရယူလိုက်ခြင်း
၃ရ	မြင့်မိုရ်ကိုချေ ဖျက်ကြေမယ့် ယောက်ျား	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၃၈	မြန်မာပြည် ရာဇဝတ် စီရင်ထုံးများ၏ ဒိုက်ဂျက်	၁၉၃၄ ခုနှစ်
၃၉	မြန်မာပြည်သား (ပထမတွဲ)	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၀	မြန်မာပြည်သား (ဒုတိယတွဲ)	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၁	မြန်မာပြည်သား (တတိယတွဲ)	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၂	ရမ္မက်၏နိဂုံး	၁၉၆၁ ခုနှစ်
၄၃	ရကြေိုမလေး	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၄၄	ရဲဘော်တို့နှင့်အတူ	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၄၅	ရန်ကုန် ဘဆွေမှ ဦးသိန်းဖေမြင့် သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ	၁၉၆၃ ခုနှစ်
၄၆	လင်ငယ် နေလိုက်ချင် စမ်းပါဘိနှင့် အခြား ဝတ္ထုတိုများ	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄ရ	သဇင်မလေးမို့	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၄၈	သီကုံးပန်းသွင် ရေးဖွဲ့ချင်သော်	၁၉၆၆ ခုနှစ်
၄၉	သူပုန်ဆိုးပေ (ပထမတွဲ)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၀	သူပုန်ဆိုးပေ (ဒုတိယတွဲ)	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၁	သူရစံကျော်	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅၂	သေသော်မှတည့် ဪကောင်း၏	၁၉၆၄ ခုနှစ်
၅၃	သည်ကောင်မလေးနှင့် သည်ကောင်လေး	၁၉၆၁ ခုနှစ်
၅၄	သည်မိုး သည်လေ သည်သူတွေနဲ့	၁၉၆၄ ခုနှစ်
၅၅	အထီးကျန်	၁၉၆၁ ခုနှစ်
၅၆	အဖတိုင်းပြည်ကြီးအတွက် လွမ်းတေး	၁၉၇၁ ခုနှစ်
၅ရ	အောင့်နိုင်ဘူးတော့နှင့် ဝတ္ထုတိုများ	၁၉၆၁ ခုနှစ်
↑ ဘဆွေ, ရန်ကုန်. ရန်ကုန်ဘဆွေ မှ ဦးသိန်းဖေမြင့် သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ. ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်.
↑ ရန်ကုန် ဘဆွေ (၁၉၃၀ - ၁၉၈၆)။ ၂၆ ဒီ ၂၀၁၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။